Rain and Flood « MMWeather Information BLOG
စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက် – ဝ၃၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ခန့်မှန်းချက်
By mmweather.ygn, on September 17th, 2013%
စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချို့၌ ၇၂ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း – ၁ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း – ၂ . . . → Read More: စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက် – ဝ၃၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ခန့်မှန်းချက်
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း USAGI-17W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် USAGI ဟု ပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း USAGI(17W)သည် အနောက်- အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် တရုတ်(ထိုင်ဝမ်ကျွန်း)တောင်ဘက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ဖြတ်သန်းကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် မြောက်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်း USAGI သည် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အင်အားအကောင်းဆုံး အခြေအနေ(အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း – CAT2 – မုန်တိုင်းဗဟို လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ 90 knots – 103.5 mph)သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
နောက်ဆုံးရ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း USAGI-17W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
One comment Uncategorized စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on September 14th, 2013%
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီတွင် မိုးသည်းထန်နိုင်မည့် မြို့-ဒေသများ၏ ဇယားနှင့် မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်းခြေပုံများ ဖြစ်ပါသည်။
1 mm = 0.0394 inch 1 mm = 0.0394 inch 1 mm = 0.0394 inch 1 mm = 0.0394 inch 1 mm = 0.0394 . . . → Read More: စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized ဂျပန်သို့ ဝင်မည့် မုန်တိုင်း MAN-YI – 16W နှင့် မြန်မာ့မိုးလေဝသအခြေအနေ
By mmweather.ygn, on September 13th, 2013%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း 16W(MAN-YI)သည် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟွန်းရှုကျွန်းမကြီး၏ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ကပ်၍ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ထိုင်း၊ ဗီယက်နန်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့အပေါ်မှ လေဖိအားနည်း Trough line သည် အောက်ဘက်ဆင်းလိုက် အပေါ်ပြန်တက်လာလိုက်နှင့် ရွေ့လျားနေသည်ကို တွေ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဒေသများအတွက် မိုးပိုမိုလာနိုင်မည့် အခြေအနေဆက်လက် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၂ဝးဝဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် ပုံအရ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်း မြောက်ပိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့ အပေါ်သို့ ထူထပ်သိပ်သည်းသော . . . → Read More: ဂျပန်သို့ ဝင်မည့် မုန်တိုင်း MAN-YI – 16W နှင့် မြန်မာ့မိုးလေဝသအခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized ဇွန်လ ၃ ရက် – ၄ရက် ၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေပြမြေပုံ
By mmweather.ygn, on June 4th, 2013%
ဇွန်လ (၄)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေပြ မြေပုံဖြစ်ပါသည်။
Leaveacomment Uncategorized ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍မိုးကြီးခဲ့
By mmweather.ygn, on May 24th, 2013%
ပုံ-၁ မေလ ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် တွေ့မြင်ရသည့် တိမ်ထုဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ ပုံ-၂ မေလ ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၉၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့် အခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြာမှုဦးစီးဌာမှ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများသို့ နောက်(၂)ရက်တွင် ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း ကြေငြာထားပါသည်။
နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၄)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၂း၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
ယနေ့နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအချိန်ထိ မိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်အကျဉ်းချုပ်။ လွန်ခဲ့သော(၂၄)နာရီအတွင်းက ကယားပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ . . . → Read More: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍မိုးကြီးခဲ့
Leaveacomment Uncategorized လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက်အတွင်း မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့်အခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်း
မေလ(၂၃)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၅၃ဝ နာရီအထိ TRMM မှရရှိသော လွန်ခဲ့သည့် ၇၂ နာရီအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော မိုးရေချိန်နှင့် မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့် နေရာများကို ပုံတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
TRMM data အရ လွန်ခဲ့သည့် ၇၂ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့တွင် များခဲ့ပြီး ကျန်ပြည်နယ်တိုင်းများတွင် နည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းသို့ မုတ်သုံလေဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း တွင် အထက်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးပုံမှန်ရွာသွန်းပြီး ပျမ်းမျှ ရွာသွန်းမြဲမိုးရေချိန်ကို ရနိုင်တော့မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
မေလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် . . . → Read More: လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက်အတွင်း မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့်အခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်း
Leaveacomment Uncategorized တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာနိုင်ပြီး ရေကြီးနိုင်
By mmweather.ygn, on May 22nd, 2013%
မေလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၂၂း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် MTSAT LOW CLOUD ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ မုတ္တမကွေ့နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတို့၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိမ်ထုအခြေအနေကို ပုံတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(မိုး/ဇလ)မှ ည ၇ နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း မနက်ဖန်ညနေအထိ ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့၌ နေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပြီး မွန်ပြည်နယ်တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
TRMM မှ Flood Potential Using Hydrological Model တွင် ထားဝယ်ခရိုင်နှင့် မြိတ်ခရိုင်တို့၌ ရေကြီးနိုင်ကြောင်း ပုံဖေါ်ထုတ်ပြန်ထားသဖြင့် သတိပြုနိုင်ကြရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ . . . → Read More: တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာနိုင်ပြီး ရေကြီးနိုင်
Leaveacomment Uncategorized မိုးရိပ်များ စတင်ပြသလာပြီဖြစ်သည့် မြန်မာ့မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized သင်္ကြန်ကာလ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ
By mmweather.ygn, on April 8th, 2013%
GFS Model မှ ပစိဖိတ် အနောက်မြောက်ပိုင်း NW-Pacific ဒေသခန့်မှန်းချက်များအရ …
မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း (လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီနှင့် အောက်ပိုင်း) ဒေသများတွင်သာ မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်ခြေရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်၊
အောက်ဖေါ်ပြပါပုံမှာ – မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ (ယခု ခန့်မှန်းချက် ရရှိချိန်မှ နာရီ ၁၅ဝ) တွင် မိုးရွာသွန်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ဒေသများပြပုံ ဖြစ်ပါသည်။